samedi, 29 janvier 2022 09:34
Sambo M/S Francia II : Tsy mbola hita ihany ny tompony ?
Iray volana mahery taorian’ilay loza an-dranomasina namoizana ain’olona am-polony maro tany Soanierana Ivongo iny dia tsy mbola misy filazàna ofisialy mikasika ny fisamborana ny tompon’ilay sambo M/S Francia II. Nanjavona tsy hita popoka io olona io vantany vao nitranga iny loza mahatsiravina izay naningotra ny ain’olona maro sy manamboninahitra ambony roa iny. Nanaovana fisaonam-pirenena iny voina lehibe iny ny tontolo andron’ny 23 desambra.Toa zary adinodino anefa ny raharaha nampahonena iny noho ireo fahasahiranana misesisesy nitranga tato ho ato. Na izany na tsy izany dia manana ny fahaiza-manao ny mpanao fanadihadihana malagasy.Tsy ampy anefa ny fitaovana sy ny tetibola mifanandrify amin’ny asany. Balita Raharisoa
jeudi, 27 janvier 2022 12:28
Toamasina Renivohitra : Nahazo jiro cobra miisa 150 hanazavana ny tanàna sy lalampasika
Notoloran’ny minisiteran'ny Angovo sy ny Akoranafo ireo jiro Cobra mandeha amin'ny herinaratra miisa 150 ny tanànan’i Toamasina Renivohitra. Ho entina hanazava ireo lalana miditra any anatin'ny tanàna sy lalampasika maro, izay azo lazaina fa faritra mafampana amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana no nisafidianan'Atoa Rakotonirina Nantenaina, Ben'ny tanàna hametrahana ireto cobra ireto. Iraka manokan'ny Minisitra Andry Heriniaina Ramaroson tonga tao Toamasina nanolotra izany tamin’ny Ben'ny tanàna, ny talen’ny Kabinetran'ny minisiteran'ny Angovo sy ny Akoranafo, Randrianaina Odon Marius. (Jereo sary Tohiny)
mercredi, 26 janvier 2022 18:57
Vonoan'olona teny Ivandry : Naiditra vonjimaika eny Tsiafahy ilay vazaha
Any amin'ny Fonjan'i Tsiafahy aloha nanomboka ny Zoma 21 Janoary 2022, Atoa Loïc LARGE, no miandry ny tohin'ny fanadihadiana sy ho fitandroana ny ainy. Ho fanajana ny lalàna iraisam-pirenena dia voafetra ny vaovao zaraina amin'ny vahoaka, araka ny nambaran'ny Tonia Mpampanoa Lalàna eo anivon'ny Fitsarana Ambaratonga Voalohany (TPI) Antananarivo, Rtoa RAKOTOARIVONY Marie Annick, sy ireo mpiara-miasa aminy akaiky nanoloana ny mpanao gazety. Tsy vaovao amin'ny Fitsarana intsony ity teratany vahiny, voarohirohy tamin'ny raharaha famonoana ny Sekretera Jeneralin'ny "Union Emergence Madagascar" herinandro lasa. Maromaro tokoa mantsy ireo raharaham-pitsarana maha voasaringotra azy, raha tsy hitanisa afa-tsy ny fanaovana taratasim-bola tsisy antoka. Izany no mahatonga azy eo ambany fanaraha-mason'ny Fitsarana nanomboka ny volana Aogositra taona 2021.
Voin-kava mahatratra : Fankaherezana ny Mpiray Tanindrazana avy amin'ny FIZAFATO
Manoloana ny voina manerana ny Nosy sy ny Firenena malagasy amin'izao loza voa-janahary izao, ny Fikambanan'ny Zanak'Ampielezan'ny Faritany Toliara (FIZAFATO), izay tarihan'ny Kestora voalohany, eo anivon'ny Antenimieram-pirenena, Solombavambahoaka voafidy tany Ambovombe, HENRI Jean Michel, dia maneho ny fiaraha-miory amin'ireo namoy havana, mankahery ireo traboina. Mankahery ny Filoham-pirenena sy ny Governemanta iray manontolo, Manentana ny vahoaka Malagasy hanaraka ny toromarika omen'ny tompon'andraikitra isan'ambaratongany, ary mampirisika ny mpiray Tanindrazana hitandro hatrany ny firaisam-pirenena sy andala ny Fihavanana ho fanampiana ireo sahirana. "Soa ty Filongoa" hoy ny depiote HENRI Jean Michel.
mercredi, 26 janvier 2022 16:47
Marolambo : Mitoka-monina tanteraka
Isany mitondra takaitra noho ny andro ratsy ny Distrikan'i Marolambo, Faritra Atsinanana. Toeram-pamokarana maro no dibo-drano. Tapaka ny lalana mampifandray amin'i Mahanoro. Manano sarotra ny fifamoivoizana an-dranomamy, zary mampitoka-monina an'i Marolambo. Efa roa volana sy tapany izao no tsy misy jiro ny tanàna.Miantso vonjy ny mponina, izay mahatsiaro ho zanak'ikalahafa tsy misy mpijery. (Jereo Sary Tohiny)
dimanche, 23 janvier 2022 22:38
Moramanga : Baraingo aloha ny rano hosotroina
Tsy afaka mamokatra rano hamatsiana ny tanànan’i Moramanga ny orinasa Jirama noho ny olana teknika nateraky ny ranobe nentin’ny rivodoza ANA. Vaky ny dobon’Ambodriakondro aty an-toerana, izay manana anjara asa mitovy amin’i Mandroseza ho an’Antananarivo. Tsy afaka mihodina ihany koa ny milina mpampakatra rano ao amin'ny reniranon'i Samarirana satria dibo-drano. Hatreto dia tsy mbola fantatra na ho afaka firy andro na ho afaka firy andro vao hiverina amin'ny laoniny ny famatsian-drano aty Moramanga.
jeudi, 20 janvier 2022 14:43
Vary Tsinjo : Tonga any an-toerana ny an'ireo faritra atsimo
Taorianan'ny fidinana ifotony nataon'ny Tale jeneralin'ny SPM SA - State Procurement of Madagascar, Solo Andriamanampisoa, tany amin'ny faritra atsimo iny, dia tonga nanomboka omaly alarobia 19 janoary 2022 ny anjaran'ny Faritra atsimo, manomboka eo Fianarantsoa, ny faritra Mahatsiatra Ambony, mihazo an'i Ihorombe Ihosy, ka hatrany Androy. Mbola andihany voalohany ihany izao raha ny fanazavana voaray, araka ny toromarika nomen'ny Filoha hanafoanana ny fanararaotana fampakarana ny vidim-bary mandritra izao maitso ahitra izao. Fiaranarantsoa sy ny Faritra Matsiatra ambony: 68 taoninaBELOHA : 164 T ANTANIMORA : 28 T AMBOVOMBE : 62 T TSIHOMBE : 102 T AMPANIHY : 41 T
jeudi, 20 janvier 2022 14:40
Andekaleka : Miasa andro, miasa alina ireo teknisianina amerenana ny herinaratra
Mizara 2 ny asa : 1- Ny vatabe mitsinjara ny herinaratra, armoire électrique, teo aloha, nodiovina, nomainina, dia soloina androany ireo kojakoja rehetra simba. Hanao andrana rahalina. 2- Ramalina mifehy hazo toaka Nanamboatra vata herinaratra, coffrets électriques vitsivitsy vaovao hanoloana ilay vatabe mitsinjara ny herinaratra, armoire électrique sao sanatria ka mbola misy olana. Apetraka tsikelikely anio, dia atao andrana rahalina ihany koa. Vonjimaika ihany aloha ilay vata herinaratra, coffrets électriques, ahafahana manavao ilay vatabe mitsinjara ny herinaratra, armoire électrique, amin'ny fomba manarapenitra ny fampiasana azy. Nahitsy sy natsaraina ihany koa ny Protocole de mise en service mba isorohana ny tampoka tsy mahalehilahy.
mercredi, 19 janvier 2022 16:39
Tsena Behoririka : Hatao « Zaimaika 2 » ?
Mihevitra ny hamadika ilay tsena misy rihana miorina etsy Behoririka ho toeram-pivarotana hani-masaka toy ny Zaimaika etsy Ambodifilao ny mpitantana ny Tanànan’Antananarivo. Miaiky ireto farany fa tsy nahomby io tetikasa iray noheverina hanadiovana ny mpivarotra amoron-dalana io. Ireo mpivarotra amoron-dalana teny amin’ny manodidina an’i Behoririka iny no nentanina hiditra tao, saingy tsy naharesy an’ireto farany izany ka nanaovan’izy ireo tsidi-pahitra, avy eo niverina nivoaka tsikelikely teo ivelany, manao fangalam-piery amin’ny fiaraben’ny Kaominina isan’andro ireo mpivarotra tao anatiny, hany ka nangadihady tsikelikely ilay toerana. Nivoaka ny resaka nanomboka ny herinandro lasa iny, na tsy mbola ofisialy aza, fa aleo hatao ho toeram-pivarotana hani-masaka (Food Court) toy ny Zaimaika io fotodrafitrasa io. Efa nisy mihitsy aza moa ny fiantsoana ireo sasantsany ao amin’ny Kaominina izay vonona ho amin’izany fandraharahana izany.
mercredi, 19 janvier 2022 14:24
RN2 : Tapaka sahabo ora iray teo ny fifamoivoizana ny alatsinainy teo
Nahitana fihotsahan-tany teo ambanin’ny toby famorakarana herinaratra any Marozevo, amin’iny lalam-pirenena faha-2 mankany Toamasina iny ny alatsinainy 17 janoary 2022. Voairaka, noho izany, ny orinasa sinoa CGC mba hanala ny ranontany niangona teny an-tsisin-dalana. Vokatr’izay dia tapaka nandritra ny ora iray teo ho eo ny alatsinainy hariva ny fifamoivoizana tamin’iny lalam-pirenena faha-2 iny. Miandraikitra ny asa fanaovan-tara ny ampahany voalohany amin’ny lalam-pirenena faha-44 Marovoay Gara (MLA)-Amboasary Gara (MLA), 40 km, ny orinasa CGC, no sady misahana ny fikojakojana ny RN2 ihany koa.